१७ अषाढ २०७४
मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा कर्मचारीको रजाइँ कसरी चल्छ भन्ने कुरा सिञ्चाई, स्वास्थ्य र उद्योगतिर हेरे पुग्छ । साउन लागेकै छैन, सहसचिवहरु बोलबमतिर निस्किएका छन् । केही विभागीय प्रमुख भ्रमण, अनुगमन, निरीक्षणजस्ता नाममा असार मसान्तअघि बजेट सिध्याउने दौडाहामा छन् । सिञ्चाई सचिव रामानन्द यादव, सहसचिव दानध्वज बस्नेत, जलउत्पन्न प्रकोप महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारी, सिञ्चाई विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र अधिकारी हुन्, धार्मिक भ्रमणको नाममा निस्किएका । यो टोली शुरुमा जुरेको… विस्तृत समाचार
​प्रधानमन्त्री स्वीकार, अध्यक्ष बहिष्कार
असार १४ गते दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएका ४ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सरकारले किन र कुन प्रयोजनका कारण स्थगन गरेको हो, सर्वसाधारणलाई थाहा छैन । चुनावमा भाग लिन्नांै, हाम्रो चित्त बुझेको छैन भन्ने राजापका नेताहरू आफूहरूले प्रदेश नं. २ को मात्र स्थगनको माग राखेकै होइन भन्दैछन् । त्यसैले सरकारले स्थगन गरिदिँदा पनि आन्दोलनको मोर्चाबाट पछि हटेका छैनन् । त्यसो त राजपाकै नियतमाथि… विस्तृत समाचार
उमा केसी परिदृश्य : १ देशभर प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेका कांग्रेस र एमालेले रोल्पामा भने मित्रताको हात बढाएका छन् । माडी गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट अध्यक्षमा गोपाल घर्ती र उपाध्यक्ष पदमा एमालेका प्रेम घर्तीको उम्मेदवारी परेको छ । सो गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले नन्दबहादुर पुनलाई अध्यक्षमा उठाएको छ । परिदृश्य : २ केही दिनअघि पार्टी परित्याग गरेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य कुलानन्द गिरीले नेकपा मालेको चुनाव चिह्न हँसिया तारा… विस्तृत समाचार
इलामका चार नगरपालिकासहित १० स्थानीय तहका लागि १६ सय १ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । मनोनयन भइरहँदा इलाम कांग्रेसमा भने बागी उम्मेदवारको पिरलो थपिएको छ । सदरमुकामको नगरपालिकामै कांग्रेसका दुई जना बागी उम्मेदवार छन् । उपप्रमुखमा ज्योतिमाला प्रधान र वडा नम्बर–७ मा बागी उठेका छन् । यसरी नै चुलाचुली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अनुप अधिकारी बागी बनेका छन् । यसरी नै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका सूर्योदय वडा… विस्तृत समाचार
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को पछिल्लो मतपरिणाम आएको ३० दिनभित्र गरिने जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका विषयमा ललितपुरमा कांग्रेस एकल र अरू सबै मिल्दा बराबर हुने अवस्था छ । सभापतिको आकांक्षासहित उम्मेदवारी दिएका हस्तीहरू वडामै पत्तासाफ भएपछि राप्रपाबाट माओवादी हुँदै कांग्रेस प्रवेश गरेका अम्मरबहादुर खड्काको सम्भावना बलियो भएको छ । सहसचिव सरहको तलब सुविधा पाइने, गाडी तथा पिए सुविधासहित भएको र अन्तर तह समन्वयबाहेक खासै काम… विस्तृत समाचार
खुराफातीले....अन्तै भोट हालेछ अन्तरघातीले । ..वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा यो गीत छरपस्ट पारे । चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले १९ नेता–कार्यकर्तालाई कारबाहीको पत्र काटेको छ । पत्र पाएलगत्तै केही कांग्रेसीले पार्टी नेतृत्वसँग नै उल्टो राजीनामा मागेका छन् । सभापति प्रेमप्रकाश ओलीलाई अन्तरघातीको आरोप लागेका शिव आचार्यले ०५६ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा टिकट बेचेको आरोप सामाजिक सञ्जालबाटै… विस्तृत समाचार
​भनेर मात्र के हुन्छ र ?
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अस्ति सोमबार निर्देशन दिएको छ । तर, संसद्को उक्त आदेश केही समयसम्म आदेशमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । मुलुकमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकका अधिकांश शाखा कार्यालय ठूला सहर, बजार तथा व्यापारिक केन्द्रमा मात्र सीमित छन् । तर, हालै तय गरिएका अधिकांश स्थानीय तहमा त्यस्ता… विस्तृत समाचार
वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा नयाँ हाकिमको आगमनसँगै अनियमितता मौलाएको छ । तेजराज पाण्डे कार्यालय प्रमुख भएपछि केही घुसखोर कर्मचारीलाई हातमा लिएर जोडतोडसाथ सक्रिय छन् । ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुदर्शन खड्का, अधिकृत राजेन्द्र पौडेल, भूपेन्द्र बस्नेत र पर्साराम भुसाललगायत भ्रष्ट कर्मचारीको नेतृत्व अहिले पाण्डेले गर्न पुगेका छन् । पैसा भए उनलाई पदको कुनै हिसाब–किताब चाहिँदैन । यसअघि भूमिसुधार विभागको २ वर्षसम्म महानिर्देशक भइसकेका पाण्डे अहिले वैदेशिक… विस्तृत समाचार
दादागिरी पनि कस्तो ! विवादस्पद छविका व्यक्ति तथा फर्मका मुद्दा हेर्दै आएका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले लागुऔषध कारोबारी मधुसूदन अग्रवालहरूको मुद्दा हेरे । मधुसूदन अग्रवाललगायतलाई उन्मुक्ति दिन पटक–पटक दबाब दिए पनि सो कुरा डा. टेकबहादुर घिमिरेले स्विकारेनन् । न्यायको पक्षमा उभिएकै सजायस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसम्मलाई प्रभावमा पारी निलम्वन गराएका थिए । रमणविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेको थिए । सो को प्रतिशोध साँध्दै विवादास्पद महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार… विस्तृत समाचार
महिला अघि बढ्दा महिला नै बाधक बन्ने कुरा ‘पानी पधेँरा’ तिर हैन, सिंहदरबारतिरै देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले घर जाने दिन मात्र आफूमाथिको महाभियोग प्रस्तावबाट मुक्ति पाइन् । यसको कारक हुन्, सभामुख ओनसरी घर्ती मगर । एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको संसद्मा अवरोध नपु¥याउने उपायको खोजी गर्न गत साता तीन दलबीच छलफल चल्यो, सिंहदरबारमा । महाभियोग फिर्ता लिनुप¥यो भन्ने थियो एमालेको बटमलाइन । एमालेले… विस्तृत समाचार